AdButler: WordPress Integrated Ad Ije Ozi | Martech Zone
Ọ bụrụ n'inwee saịtị WordPress ma chọọ ijikwa mgbasa ozi maka ndị mgbasa ozi gị, AdButler nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma n'ahịa. Njikọ WordPress site na wijetị na-eme ụlọ ma na-etinye mpaghara mpaghara mpempe achicha, yana usoro AdButler nwere ike ịhazi ya, gbanwee, gbanwee, ọbụnakwa na-enye whitelabeling.
AdButler Platform Atụmatụ Gụnyere:
Ọhụụ - Ntụkwasị obi na ntụkwasị obi dị ka ọchịchọ na-eto, site na narị otu narị na ọtụtụ ijeri echiche.
Isi Ebube - Mgbasa ozi AdButler na-eme ka ndị na-ebipụta akwụkwọ gwakọta ahịa dị iche iche na ọtụtụ ndị na-agwa ha ka ha nwee ike ibuwanye ego.
Rich Media Ad Nkwado - Na-efe ihe okike niile, gụnyere HTML5, vidiyo, flash, onyonyo, email, mkpanaka na ịkpọ oku adighi.
Video Ad-Ije Ozi (Ochie) - AdButler dị mfe iji VAST 2.0 kwenyere modul ga-azọpụta gị oge na obi mgbawa.
Akụkọ ozugbo - Ozugbo nweta ike, akụkọ ozugbo.
Anara m AdButler maka ule nnwale ma nwee obi ụtọ na etu esi wulite usoro ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na otu efu atụmatụ, M gaara n'ụzọ zuru ezu na-emejuputa atumatu ya na saịtị… onwe-ọrụ. Ọ dị m ka ya bụrụ na saịtị ahụ nwere ihu akwụkwọ mepere emepe yana ikike ndị mgbasa ozi nwere ijere onwe ha ozi. Ọzọkwa, mwekota na ụzọ ịkwụ ụgwọ maka ịnakọta ego mgbasa ozi site na ndị mgbasa ozi ga-adị mma.
Ọ bụrụ na ị na-ejikwa saịtị nke gị na ndị mgbasa ozi, agbanyeghị, AdButler bụ ezigbo nyiwe bara ọgaranya.
AdButler Ad Serving Nhọrọ Gụnyere
Ngagharị - AdButler na-eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-agafe oge maka ọbụna nkesa mmetụta.
Capping ugboro ole - Agbachi ugboro ole mgbasa ozi ga-egosi otu onye ọrụ.
Nkewa Daybọchị - Zube mgbasa ozi dabere na oge nke ụbọchị.
Ndị na-ege ntị
Ebumnuche Geographic - Ebumnuche mgbasa ozi site na mba, mpaghara ma ọ bụ steeti, ma ọ bụ dịka akọwapụtara dịka obodo.
Icheta nyiwe - Ikwado na ijikwa mgbasa ozi dabere na ndị ọrụ ngwaọrụ na-eleta.
Izu Izu Okwu - Gwa mgbasa ozi mgbasa ozi site na isiokwu tinyere agụ egwuregwu.
Nchịkwa Dị Mfe
Otutu Onye Akaụntụ Akaụntụ - Mepụta ọtụtụ akaụntụ njirimara dịka ọ dị mkpa iji jikwaa na ijere ngwa ahịa.
Channels Mgbasa ozi - Kpọkọta mgbasa ozi yiri nke ahụ site na isi mmalite mgbasa ozi gaa na otu ọwa mgbasa ozi dị mfe.
Aka Nkwado - Otu nkwado AdButler dị site na ekwentị ma ọ bụ e-mail.
Etu esi etinye ma hazi AdButler na WordPress
Wụnye ngwa mgbakwunye, tinye igodo, yana saịtị WordPress gị jikọtara ya na AdButler! Lee ụfọdụ vidio ndị na-ejegharị na usoro ahụ:
Tags: sava admgbasa ozionye mgbasa ozimgbasa ozi ọwageographic ezubere iche maka sava mgbasa oziisiokwu gbadoro sava adikpo okwu ezubere iche maka sava adWordPresswordpress ad na-eje ozi
Mmelite: Melite CMS ọ bụla, Ecommerce Platform ma ọ bụ weebụsaịtị Weebụ